Mpanamboatra sy mpamatsy dock Ramp | China Dock Ramp Factory
China Dock RampMizara roa ny karazany iray, ny iray dia ny daban'ny finday ary ny iray kosa eo an-tokotanin'ny tokotany mijanona. Ny haavon'ny faritra voalohany eo amin'ny sehatry ny tetezana mitaingina dia azo ahitsy arakaraka ny haavon'ny fitoeran'ny kamio, ary ny molotra mifanindry dia manakaiky ny efitrano.
Stationary Dock Ramp dia entin'ny tobin'ny paompy hydraulic sy motera elektrika. Izy io dia miaraka amina varingarina hydraulic roa. Ny iray ampiasaina hitraka ny lampihazo ary ny iray hampiasaina hampiakarana ny clapper. Mihatra amin'ny fiantsonan'ny fitaterana na ny tobin-tsolika, ny fandefasana entana sns ..
Fahazoana entana: 6 ~ 15ton. Manolora serivisy namboarina. Haben'ny sehatra: 1100 * 2000mm na 1100 * 2500mm. Manolora serivisy namboarina. Valve spillover: afaka misoroka ny tsindry mafy rehefa miakatra ny masinina. Amboary ny tsindry. Valizy mihena vonjy taitra: afaka midina izy rehefa sendra vonjy maika na maty ianao.
Ny karazana fiara fitaterana rehetra dia afaka mandalo tsara ny tetezana mitaingina hitaterana entana eo amin'ny gorodon'ny trano fitehirizana sy ny kalesy. Izy io dia mandray maody fanaraha-maso bokotra tokana, izay tena mety amin'ny fiasa. Mpikirakira iray ihany no takiana miasa, ary ny entana dia azo entina haingana sy alaina. Izy io dia mahatonga ny asa mavesatra sy ny fandefasan'ny orinasa mora, azo antoka ary haingana, amin'izay dia mitahiry asa be, manatsara ny fahombiazan'ny asa, ary mahazo tombony ara-toekarena faran'izay betsaka. Izy io dia fitaovana ilaina amin'ny famokarana azo antoka sy voalamina amin'ny orinasa maoderina ary fanatsarana ny hafainganan'ny logistika. Ny iray hafa dia ny lalamby finday, io lakandrano io dia natao tetezana tetezamita ho an'ny forklift handeha avy amin'ny tany mankany anaty kalesy rehefa feno kamio ary alefa Ny fivezivezeny dia afaka mameno ny fepetra takiana amin'ny fandefasana sy famoahana asa amin'ny toerana samihafa. Izy io dia vita amin'ny fantsom-by mahitsizoro vy manganese mahery miaraka amin'ny tanjaka lehibe. Ny tehezan-tendrombohitra dia vita amin'ny makarakara vy mifikitra amin'ny nify, izay manana fahombiazana manohitra ny tady. Ny faran'ny fitaovana dia tsaboina amin'ny alàlan'ny fipoahana fipoahana sy fidinana an-drano, ary paompy hydraulic iray tanana no ampiasaina ho toy ny hery manainga. Tsy ilaina ny famatsiana herinaratra avy any ivelany, izay mety amin'ny fampiasana ivelany any amin'ny toerana tsy misy herinaratra.